Tọchara S-Voice maka Samsung ọ bụla na gam akporo 4.0 | Gam akporosis
Francisco Avila | | Ngwa gam akporo, Nkuzi
Kemgbe ngosi nke Samsung Galaxy S3 na ya ọhụrụ metụtara ọrụ, anyị na-ama enyo enyo na ọ gaghị ewe ogologo oge ruo mgbe ụfọdụ ndị ọrụ nke Ndị na-emepụta XDA wee pụọ na usọbọ iji mmemme ohuru ndị a na ọdụ ndị ọzọ.
Ọ bụ ikpe anyị na-ewetara gị taa. Na ọrụ ahụ, nke ka ga-emepe, bụ otu n'ime oke ọchịchọ nke gụnyere Samsung Galaxy s3. Ọ bụ S-Voice, na ọ bụ ihu ọma Samsung si version maka gam akporo nke Apple amaara ama Siri maka iOS.
Ekele diri onye ọrụ XDA "Ascarface23", anyị nwere S-Voice .apk nke egosiri na ọ na-arụ ọrụ (ọ dị ka ọ bụ naanị na Spanish, ebe ọ bụ na Samsung ka na-akwado mmepe) na ngwaọrụ dị iche iche nke ika South Korea na ROM gam akporo 4.0.4, ya mere anyị chere na ọ bara uru nnwale gị, ọ bụrụhaala na ị nwere mgbọrọgwụ ohere na ngwaọrụ gị.
Iji wụnye .apk n'ụzọ ziri ezi, anyị na-ahapụ gị obere briefs ihe ngosi (Ọ gwụla ma ịchọrọ ịgbalị ịwụnye .apk na ụzọ mbụ; ọ nwere ike ịrụ ọrụ maka gị):
Mee nkwado "nandroid", ka obi dajụọ gị.
Budata .apk ma tinye ya na ebe nchekwa ekwentị.
Iji mmemme dika - Mgbọrọgwụ Explorer, idetuo na .apk faịlụ na mado ya n'ime usoro / ngwa (mgbe inye ikikere site na ịpị "Ugwu R / W")
N'ime usoro / ngwa, pịa ogologo na .apk, họrọ "Ikike" wee gbanwee "ịgụ na ide", "gụọ" na "gụọ".
Ikekwe S-Voice nke Samsung abụghị nnukwu ọganiihu iji jikwaa ọnụ ya site na olu anyị, opekata mpe na ọkwa mmepe ya ugbu a. Karịsịa ebe ọ bụ na anyị nwere ezigbo mmemme dị ka Vlingo ma ọ bụ Vita, nwere arụmọrụ yiri nke ahụ. Ma na enweghị mgbagha ọ bụ ubi ka ga-erigbu nke ga-ewetara anyị nnukwu ịtụnanya n'ọdịnihu nke gam akporo smartphones na anyị ụzọ nke mmekọrịta na ha, ya mere ime ụlọ maka imezi ihe doro anya na ọ sara mbara.
Ozi ndị ọzọ - Kpoo Samsung Galaxy S3 ohuru, ugbu a
Budata - S-Voice
Isi mmalite - Ndị na-emepụta XDA
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Budata S-Voice maka Samsung gị na gam akporo 4.0
Ndewo Enwere m ihe ngosi galaxy Samsung 3 na asụsụ Bekee, Korean na Japanese. Na svoice nwekwara n'otu asụsụ ahụ. Ọ ga-arụ ọrụ na Spanish?